Shiinaha Lanthanum Fluoride LaF3 Soo-saar iyo Warshad | Liche
Lanthanum Fluoride (LaF3), Purity≥99.9% CAS No. Waxay leedahay codsiyo yar sida adeegsiga fiber optics, koronto, laambadaha dhaadheer iyo barnaamijyada shucaaca. Lanthanum Fluoride, waxaa badanaa lagu dhajiyaa muraayadda qaaska ah, daaweynta biyaha iyo kiciyaha, iyo sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu sameeyo Lanthanum Birta. Lanthanum Fluoride (LaF3) ...
Lanthanum Fluoride (LaF3), Nadiif ≥99.9%
CAS Maya.: 13709-38-1
Miisaanka Molecular: 195.90
Barta dhalaalida: 1493 ° C
Lanthanum Fluoride (LaF3), ama lanthanum trifluoride, waa dhalaal sare, iskuxirnaan ionic ah. Waxay leedahay codsiyo yar sida adeegsiga fiber optics, koronto, laambadaha dhaadheer iyo barnaamijyada shucaaca.
Lanthanum Fluoride, waxaa badanaa lagu dhajiyaa muraayadda qaaska ah, daaweynta biyaha iyo kalluumeysiga, iyo sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu sameeyo Lanthanum Birta. Lanthanum Fluoride (LaF3) waa qayb muhiim ah oo ka mid ah galaaska Fluoride culus oo loogu magac daray ZBLAN. Muraayaddani waxay leedahay gudbinta ka sarreysa heerka infrared-ka sidaas darteedna waxaa loo adeegsadaa nidaamyada isgaarsiinta fiber-optic. Lanthanum Fluoride waxaa loo isticmaalaa rinjiyeyaasha nalka fosfooraska. Lagu qasan yahay Europium Fluoride, waxaa sidoo kale lagu dhajiyaa xuubka kareemka ee Fluoride ion-selective electrodes.
Lanthanum Fluoride (LaF3) waxaa badanaa loo isticmaalaa:
- diyaarinta tikniyoolajiyadda casriga ah ee muuqaalka caafimaadka iyo shuruudaha looga baahan yahay scintillator sayniska nukliyeerka
- alaabada dhifka ah ee laser laser crystal
- Fluoride galaas fiber optic iyo muraayad infrared dhul ah oo dhif ah. Waxaa loo adeegsaday soo saarida koronto kaarboonka iftiinka aaladda iftiinka
- falanqaynta kiimikada loo isticmaalo soosaarida koronto xaddidan oo fluorine ion ah
- warshadaha qalliinka ee loo isticmaalo soo saarista isku-dhafka gaarka ah iyo koronto-soo-saarka birta lanthanum
Hore: Holmium Fluoride HoF3
Xiga: Neodymium Fluoride NdF3